बालीमा क्षती गर्ने सलह किराको नियन्त्रण कसरी गर्ने ? [अडियो सहित] « Salyan Today
बालीमा क्षती गर्ने सलह किराको नियन्त्रण कसरी गर्ने ? [अडियो सहित]
पछिल्लो केही दिनयता सल्यानमा सलह किरा देखिएको छ । अहिले जिल्लाका बिभिन्न बस्तीहरुमा सलह किरा देखा परेको किसानहरुको भनाई छ । कपुरकोट क्षेत्रबाट जिल्लामा प्रवेश गरेको सलह अहिले जिल्लाका बिभिन्न क्षेत्रमा देखा परेको छ । जसका कारण किसान चिन्तित भएका छन् ।
बागचौर नगरपालिका ४ लौरावाङका किसान नन्दलाल केसीले यस क्षेत्रमा मात्रै करिब ४ हजारको मात्रामा सलह किरा देखिएको बताउनुभएको छ । यस क्षेत्रमा लगाएको मकैँवाली सलह किराले खान थालेको बताउदैँ उहाँले बिभिन्न उपाय अपनाए पनि सलह किरालाई भगाउन नसकिएको बताउनुभएको छ ।
जिल्लामा देखिएको सलह किरालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त सल्यान टुडेकर्मी बुद्धि पुनले कृषि बिकास कार्यालय सल्यानका प्रमुख महेश आचार्यसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । शुरुमा उहाँले सल्यानको कुन कुन क्षेत्रमा सलह देखिएको छ भनेर सोध्नुभएको छ ।